लघुकथा: झिलिमिलीको सहर – MEDIA DARPAN
लघुकथा: झिलिमिलीको सहर
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २१ जेष्ठ २०७५, सोमबार १५:१५
केही पर चोकमा जुनेली रातको सन्नाटालाई चिर्दै कोही बिलौना गरिरहेको सुनिन्थ्यो । अस्पष्ट र निरन्तर झर्को लाग्दो गुनगुनाहट कानमा प¥यो । चुरोटको अन्तिम सर्कोसँगै म त्यही विकृत र भग्नावशेष आकृतितर्फ बढे । अन्दाजी २५–२६ सेरोफेरोको यौटी युवती मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा बेपर्वाह बरबराइरहेकी थिई । वरपर केही मानिसहरू त्यस आकृतिदेखि तर्कंदै परपरबाट हिँडेको देखिन्थ्यो । एकाएक उनको आँखा मसँग जुध्यो । क्षितिजभन्दा पनि पर पृथ्वीको कुनै कुनामा दुई अपरिचित प्राणीको अकल्पनीय र अन्योन्याश्रित भेट जस्तो ऊ झसङ्ग भई र मौन रही ।
मलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो र बिस्तारै गन्तव्यविहीन पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न लाग्दा ऊ अघिको कर्कश आवाजबाट बाहिर निस्किँदै केही भन्न थाली । ‘सुन्नुस न ?’ म फर्किएँ । ‘के ऊ फर्केर आउला त मलाई लिन ?’ म अकमकिएँ ‘कहाँबाट ?’ ‘ऊ त्यो बादलभन्दा पनि पर.. धेरै परको सहरबाट ? भन्नुस् न ? ऊ छिट्टै आउँछु भन्थ्यो । ऊ आएर मलाई लिएर जान्छु भन्थ्यो । त्यो रातमा पनि उज्यालो हुने सहरमा । हा.. हा.. त्यो झिलिमिलीको सहरमा । उसले वाचा गरेको थियो ।’ ऊ एकाएक भुइँमा हेर्दै सुकसुकाउन थालि। ‘सुन्नुभएन तपाईंले ? उसले कसम खाएर गएको थियो । भन्नुस् न ऊ आउँछ नि ?’
म फिस्स हाँसे र सोचे आखिर के नै फरक छ र हामी दुईमा । ऊ कसैको यादमा पागल भई र म पागल भएर कसैलाई याद गर्दैछु । सायद हामी दुवैको कुनै भविष्य छैन र भविष्य नभएका हामी दुवै खेलौनाजस्तै हौँ । कसैको जरुरत पूरा भएसँगै मिल्किन्छौँ, कुनै कुना कन्दराहरूमा । समयको आँधीबेहरीसँगै कसैले नदेख्ने र कसैले नभेट्ने गरी । म फिस्स हाँसे । ‘अवश्य धैर्य गर । ऊ फर्केर आउँछ । अनि तिमीलाई पनि त्यो झिलिमिलीको सहरमा लिएर जान्छ ।’ उसको विकृत चेहरा अकस्मात उज्यालो भयो । केही कुरा पाएर तृप्त भए जस्तो गरी ऊ खुसी हुँदै निलो गगनतिर नियाल्दै चिच्याउँन थाली । ‘सुन्यौ मैले भनेको थिए नि, तिमीलाई । ऊ एक दिन फर्केर आउँछ र मलाई लिएर जान्छ.. ।’ केहीबेरमा ऊ त्यहाँबाट बिलिन भई ।
म कतै लागेँ । थाहा छैन कता हिँड्दैछु र सोचेँ सायद उनले पर्खी बसेको त्यो अपरिचित कहाँ होला ? कतै परदेशमा उसको सम्पत्तिसँगै सपनाहरू पनि बढ्दै गयो कि ? वा सपना देखाउँनेहरू पनि बढ्दै गए ? वा सपनाहरूसँगै घमण्ड पनि बढ्दै गयो ? थाहा छैन तर ऊ निश्चय पनि फर्कंदैन । उसले त्यो रङ्गीन दुनियाँभित्र यी पुराना यादहरूलाई च्यातेर फ्याँकिसक्यो होला कुनै समुद्री किनारमा । जसलाई हरेक छालको लहरले बिस्तारै शून्यतामा विलीन गराएर सधैँका लागि अन्त्य गरिदेओस् ।
यात्रुको जिउ गन्हाएपछि जहाजको आपतकालीन अवतरण !
गोरेका अर्का सहयोगी पक्राउ